နိုင်ငံ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချောင်းဟန့်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍ | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
နိုင်ငံ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချောင်းဟန့်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍ	Posted by mm thinker on September 8, 2009
Posted in: Media, Politics.	Tagged: Media, Politics.	3 Comments
“သင်ကောင်းလျှင်ကျွန်ုပ်မဆိုးပါ”။ “သင်ကောင်းကောင်း၊ မကောင်းကောင်း ကျွန်ုပ်ကောင်းပါမည်” ဟူ သည်နှင့် “သူတို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့”ဟူသော လော့ဂျစ်ပါသည့်လူမှုဆက်ဆံရေးအယူအဆ များကို မကြာခဏဆိုသလို မီဒီယာများတွင် ဖော်ပြလာသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။ နှစ်ခုစလုံးစိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းသည်။
“သင်ကောင်းလျှင် ကျွန်ုပ်မဆိုးပါ”ဟူသည်နှင့် “သင်ကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်း ကျွန်ုပ်ကောင်းပါသည်”ဟူသည့် လောဂျစ်အကြောင်းကို မဆွေးနွေးမီ နိုင်ငံ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မီဒီယာများ၏အခန်းကဏ္ဍကို အကျဉ်းချုံးပြောလိုပါသည်။ စာဖတ်သူများ သိနှင့်ပြီးသည့်အတိုင်း မီဒီယာဟူသည် လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၊ နိုင်ငံတစ်ခု၏ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်ဖြစ်သည်။ လိုရင်းတိုရှင်း ပြောပါက စောင့်ကြည့်သူ (Watchdog) ဖြစ်သည်။ လွဲချော်မှုများ၊ တရားမမျှတမှုများနှင့် ထူးခြားမှုများရှိလျှင် ဖော်ထုတ်မည်။ သတင်းအချက်အလက်များ၊ အဖြစ်သနစ်များကို ရေးသားတင်ပြဟန်အမျိုးမျိုးဖြင့် ရေးသားပြမည်။ ဤသည်ကို သတင်းပေးပို့မှု (Reporting Process) ဖြစ်စဉ်ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ ထို့နောက်တစ်ဆင့်တက်၍ ပြောမည်ဆိုပါက မီဒီယာတွင်ရှိသော အယ်ဒီတာများနှင့် သတင်းထောက်များ (သတင်းစာဆရာများ) က အဆိုပါအဖြစ်သနစ်များကို သုံးသပ်ချက်၊ ဝေဖန်ချက်(ခေါင်းကြီး) စသည်ဖြင့် ရေးမည်။ ဟောကိန်းများလည်း ပါကောင်းပါလာနိုင်ပါသည်။ ဤ နေရာတွင် သတိထားစရာရှိလာသည်ဟု ကျွန်တော်ထင်သည်။ သတင်းပေးပို့မှု ဖြစ်စဉ်မှာ အရှိ ကိုအရှိအတိုင်း တင်ပြရေးသားမှုဖြစ်သည့်အတွက် သတင်းပေးပို့သူ ရီပိုတာ (သို့) သတင်းသမားက ရေးသားသော သတင်းအချက်အလက် တိကျမှန်ကန်မှု၊ ကျင့်ဝတ်နှင့်ကိုက်ညီမှုသာ လိုအပ်သည်။ Tell it, as it is ဖြစ် ရန်သာအရေးကြီးသည်။ သို့သော် အဆိုပါ သတင်းဖြစ်စဉ် (သို့) ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို သုံးသပ်ချက်နှင့် ဝေဖန်ချက်များ ပြုလုပ်ရာတွင်သော်လည်းကောင်း၊ ပြုလုပ်မှုများကို ဖတ်ရှုရာတွင်လည်းကောင်း သတိထားသင့်သော ကိစ္စတချို့ပါရှိလာပါသည်။
ကျွန်တော်သည် ဂျာနယ်လစ်ဇင်လောကတွင် ဂုရုတစ်ဦးမဟုတ်သလို ဝါရင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းမဟုတ်ပါ။ ဆယ်နှစ်ပင်မပြည့်သေးသော အတွေ့အကြုံကိုအခြေခံပြီး ကျွန်တော့်အမြင်ကိုပြောရလျှင် နိုင်ငံတစ်ခု၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးအစရှိသည်တို့နှင့် ဆက်စပ်သော ပဋိပက္ခများကို သတင်းစာဆရာက ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်ပေးရာတွင် ဖြစ်ရမည်ဟူသည်ထက် ဖြစ်သင့်သည်ဟူသည်ကို သာဦးစားပေးသင့်သည်။ လုပ်ရမည်ထက် လုပ်သင့်သည်ကိုသာ ပြောဆိုရေးသားခြင်းမျိုး ဖြစ်သင့်ပါသည်။
သတင်းစာဆရာ (ဂျာနယ်လစ်) များ၏ အများနှင့်မတူသောအချက်မှာလည်း ပဋိပက္ခတစ်ခု၊ သတင်းဖြစ်ရပ်တစ်ခုကို တတိယလူရှုထောင့် (Third Person) အနေဖြင့်ရှုမြင်နိုင်မှု၊ တစ်နည်း Bird Eye’s View ခေါ် အဖြစ်သနစ်တစ်ခုကို အပေါ်မှ လုံးစေ့ပတ်စေ့ တွေ့မြင်နိုင်အောင်ပြုလုပ်နိုင်မှုပင်ဖြစ် ရာ ၄င်းတို့၏ရေးသားမှုများမှာလည်း တတိယလူတစ်ဦး၏အမြင်မျိုးသာ ဖြစ်သင့်ပြီး ယင်းတို့အား စာဖတ်သူများက တတိယလူအဖြစ်သာ ရှုမြင်သင့်သည်။ သတင်းစာဆရာများကို Third Line Third Force ဟုဆို၍ရသည်။သို့သော် ယနေ့နိုင်ငံရေးလောကတွင်ပြောဆိုနေ ကြသော Third Line Third Force သမားများမဟုတ်ပါ။ လွန်စွာသတိထား သင့်သောအချက်မှာ နိုင်ငံရေးတွင် Pro နှင့် Anti အစရှိသည့် ဘက်များအကြောင်း ရေးသားမိသောကြောင့် သတင်းစာဆရာများကို နိုင်ငံရေးသမားများအဖြစ် မရှုမြင်မိရေးပင်ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံရေးသမားအလုပ်ထက် နိုင်ငံ့အရေးကို စိတ်ဝင်တစားလုပ်ကိုင်နေသည်ဟု ဆိုလျှင်ရပါသည်။
ကျွန်တော့်အမြင်ပြောပါက သတင်းစာဆရာများသည် Troubleshooter များမဟုတ်ပါ။ Troubleshooter များ မျှမျှတတ Troubleshoot လုပ်ရန်ချောင်းဟန့်သံ ပေးနေသူများဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့စာမျက်နှာများပေါ်တွင် ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် ဆောင်းပါးရေးသားသူ၊ ရေးသားမှုများ နှင့်ဆက်စပ်ပြီး အပြန်အလှန်ဝေဖန် ပုံဖော်၊ တံဆိပ်ကပ်ကြခြင်းများကို ဖတ်ရှုမိသည့်အခါတိုင်း ကျွန်တော်ကြည့်ဖူးသော ကာတွန်းကားလေးတစ်ကားကို အမှတ်ရမိသွားပါသည်။ ထိုကာတွန်းကား၏ အမည်မှာ Finding Nemo ဖြစ်သည်။ စာဖတ်သူများလည်း ကြည့်ရှုဖူးပါလိမ့်မည်။ ထိုဇာတ်ကားထဲတွင် ခေါင်းဆောင်ဇာတ်လိုက် နီမိုအပါအဝင် အခြားသော ငါးကလေးများသည် ငါးဖမ်းပိုက်ကွန်ကြီးတစ်ခုထဲသို့ ရောက်သွားကြသည်။ ပိုက်ကွန်ထဲ ရောက်သွားသောကြောင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ပိုမိုနီးကပ်သွားသည်။ အနေအထားတစ်ခုထဲသို့ ရောက်သွားသည့်ငါးကလေးများ၏ ကံကြမ္မာမှာလည်း တူသွားသည်။ သို့သော်ငါးကလေးများမှာ ပိုက်ကွန်ထဲမှ မည်သို့မည်ပုံရုန်း ထွက်မည်ကို မစဉ်းစားဘဲ အချင်းချင်း တွန်းကြ၊ တိုက်ကြသည်။ ခိုက်ရန်ဖြစ်ကြသည်။ ဤတွင် ခေါင်းဆောင်ငါးကလေးနီမိုက ငါးများအားလုံး အင်အားစုစည်းပြီး သမုဒ္ဒရာကြမ်းပြင်ဘက်သို့ ထိုး ဆင်းပါက ငါးဖမ်းလှေပါပါလာပြီး အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်လိမ့်မည်ဟု အကြံပေးတော့မှ အားလုံးသဘောပေါက်ကာ အကျပ်အတည်းမှ လွတ်မြောက်သွားကြတော့သည်။ လွန်စွာကောင်းသော ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်၏ ဆိုလိုရင်းကိုစာဖတ်သူများ ကောင်းစွာ နားလည်သဘောပေါက်ကြလိမ့်ဟု ထင်ပါသည်။ ဆက်၍အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုရန်ပင်လိုမည်မထင်ပါ။
“သင်ကောင်းလျှင် ကျွန်ုပ်မဆိုးပါ”။ “သင်ကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်း ကျွန်ုပ်ကောင်းပါမည်”ဟူသော ကိစ္စမှာ ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရသည့် ကိစ္စဖြစ်ပါသည်။ ဘက်နှစ်ဘက် သို့မဟုတ် အုပ်စုနှစ်စုရှိမည်။ သာမန် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းဆက်ဆံရေးမျိုး ထူထောင်ရန်ကိစ္စဖြစ်ပါက “သင်ကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်း ကျွန်ုပ်ကောင်းပါမည်”ဟူသော သဘောမျိုးထားနိုင်လျှင် အပြန်အလှန် ယုံကြည်မှုအမြန်ဆုံးထွက် ပေါ်လာနိုင်သည်။ မဟာဗျူဟာ သို့မဟုတ် ပါဝါယှဉ်ပြိုင်ရသည့်ဆက်ဆံ ရေးမျိုးဖြစ်ပါက “ကျွန်ုပ်က ကောင်းပါ မည်၊ ရလဒ်သည် သင်၏ တုံ့ပြန်မှု အပေါ်တွင်သာမူတည်သည်” ဟူသည့် သဘောမျိုးဖြစ်သင့်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်ဘက်က စ၍အပြုသဘောဆောင် သည့်လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အသိအမှတ် ပြုမှုများကို ဖော်ထုတ်ရန်ဆန္ဒရှိသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် မိတ်ဆွေအဖြစ်လက် ဆွဲနှုတ်ဆက်ရန် ကမ်းလှမ်းမည့်သူမှာ ကျွန်ုပ်ဖြစ်သည်။ ကမ်းသောလက်ကို လှမ်းယူခြင်း၊ မယူခြင်းက သင့်၏အလုပ် ဖြစ်သည်ဟူသော သဘောမျိုးဖြစ်ပါသည်။
အရေးကြီးသည်မှာ ဘက်နှစ်ဘက်စလုံးသည် ပြင်ညီကွင်းတစ်ခုပေါ် သို့ရောက်ရှိထားရန် လိုအပ်သည်။ တစ်ဖက်က အပေါ်စည်း၊ တစ်ဖက်က အောက်စည်းဖြစ်နေလျှင် မည်သို့သော ယုံကြည်မှုများကိုမှ တည်ဆောက်နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ စာဖတ်သူများစိတ်ကူးဖြင့် ပုံဖော်ကြည့်စေချင်ပါသည်။ လှေကားထိပ်တွင်ရပ်နေသူနှင့် လှေကားအောက် တွင်ရပ်နေသူနှစ်ဦး လက်ဆွဲနှုတ်ရန်မှာ စိတ်ကူးယဉ်သက်သက်သာဖြစ်သည်။ တစ်ယောက်က အပေါ်တက်လျှင်တက်၊ သို့မဟုတ်တစ်ယောက်က အောက်ကိုလာလျှင်လာပါမှ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မှု ပြုနိုင်ရေး၊ မပြုနိုင်ရေးကို စဉ်းစားနိုင်ပါမည်။ တတိယလူ ရှုထောင့်မှကြည့်တတ်သော သတင်းစာဆရာများမှာ၏ တာဝန်မှာ မည်သူ အပေါ်တက်ရမည်၊ မည်သူအောက်ဆင်းရမည်ဟု ကြားဝင် Troubleshooting လုပ်ရန်မဟုတ်ပါ။ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်မှု ဖြစ်ပေါ်လာရေးနှင့် ရရှိထားသည့်အနေအထားများ၊ ရရှိလာ သော ရလဒ် (အကျိုးဆက်များ) မျှတမှု ရှိ၊ မရှိကို ချောင်းဟန့်ပေးရေးဖြစ်ပါသည်။ ချောင်းဟန့်သူများ မျှတမှုရှိ၊ မရှိကိုမူ စာဖတ်သူများက Feedback ပေး ကာ Evaluation လုပ်ကြပါလိမ့်မည်။ ဤသည်မှာ ဒီမိုကရေစီနှင့် Check and Balance သဘောပင်ဖြစ်သည်ဟု ကျွန် တော်လက်ခံထားပါသည်။
← ထို ၂ ပုဒ်	ဂျပန်ရွေးကောက်ပွဲ သုံးသပ်ချက် →	3 comments on “နိုင်ငံ၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့် ချောင်းဟန့်သူများ၏ အခန်းကဏ္ဍ”
ခိုင်စိုးလင်း on September 8, 2009 at 9:58 am said:
ဒီလထဲ ဖတ်သမျှ စာတွေထဲမှာ စိတ်တိုင်းအကျဆုံးပဲ
Reply	komyintmyat on September 9, 2009 at 12:26 am said:
Reply	တေဇာ on September 10, 2009 at 4:42 pm said:
မဟာဗျူဟာ သို့မဟုတ် ပါဝါယှဉ်ပြိုင်ရသည့်ဆက်ဆံ ရေးမျိုးဖြစ်ပါက “ကျွန်ုပ်က ကောင်းပါ မည်၊ ရလဒ်သည် သင်၏ တုံ့ပြန်မှု အပေါ်တွင်သာမူတည်သည်” ဟူသည့် သဘောမျိုးဖြစ်သင့်သည်။
ကောင်း… ကောင်း… ။